ISkål International Hua Hin kunye noCha Am baqalisa kwakhona
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » ISkål International Hua Hin kunye noCha Am baqalisa kwakhona
Iindaba zeManyano • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Education • Iindaba zeGuam Breaking • iindaba • Xanduva • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Iindaba zeWired Travel
I-Skål International Hua Hin kunye ne-Cha Am zisungulwe kwakhona kwiveki ephelileyo.
Ukuqaliswa kwakhona kweeklabhu ngumbono woMlawuli Jikelele, uMnu. Richard Mehr, wasePutahracsa Resort, oza kubambela uMongameli weqela kunye no-Mnu. Stacey Walton, Umphathi Jikelele we-Banyan Golf Club, u-Hua Hin oza kubambela njenge-Sekela Mongameli Yeklabhu esandula ukutyhilwa ngokutsha ukwenza utshintsho kunye nokwamkela isiqalo esitsha senzuzo yokuhamba nokhenketho.
Umsitho okhethekileyo, wokubhiyozela ukuphinda uqaliswe, ububanjwe namalungu eSkål kunye neendwendwe zawo kwindawo entle yokutyela i-Oceanside e-Putahracsa Resort, e-Hua Hin.
Sele kuyiminyaka eli-11 okoko kwaqaliswa ngokusesikweni iSkål Intl Hua Hin & Cha Am kwaye kudala ilindelwe ngoochwephesha kwiihotele, igalufa kunye nomzi mveliso wezokhenketho kule ndawo yaseRoyal yembali ukuba babumbane njengeqela elinye, ababelana ngeenjongo ezifanayo. yokudala iklabhu entsha enesiqalo esitsha kunye nekamva elinomdla lokwenza ishishini phakathi kwabahlobo. Kwaye ekugqibeleni ukukhuthaza indawo ekuya kuyo iHua Hin kunye neCha Am kwihlabathi liphela ngazwi linye.
URichard Mehr kwintetho yakhe yokuvula uvumile kwaye wabulela uMongameli weSkål Thailand, uWolfgang Grimm kunye namalungu eqela ukusuka kwindawo ngoku eyi-6 Skål club eThailand: iPhuket, Krabi, Samui, Chiang Mai, Hua Hin nase Bangkok. Ubulele abameli beklabhu abebekhona ngenkxaso yabo ekusungulweni kwakhona kweklabhu kunye namalungu angama-18 aseke eHua Hin naseCha Am abandakanya abaphathi Jikelele baseHyatt, Marriott, Intercontinental, Avani, Anantara, G Resort & Marrakesh ngokufuna ukuqalisa iklabhu kunye nomsebenzi kunye neenjongo zeSkl International kwiHlabathi liphela.
UStacey Walton uphawule wathi, “Ndaye ndalilungu leSkål Int'l Hua Hin & Cha Am emva phaya ngo-2007 kwaye ngelishwa eli qela lapheliswa kwiminyaka embalwa edlulileyo. Ndabelana ngombono ofana nokaRichard wokuba bekukho isidingo sombutho wamanye amazwe apho iingcali ezinomdla ofanayo kwiihotele, kwizifundo zegalufa, kwezohambo nakwezokhenketho zinokuqokelela kwaye zitshintshisane ngolwazi, zabelane ngezimvo kwaye zihlale zinolwazi ngeziganeko nakwizinto ezenziwa eHua I-Hin & Cha Am kwindawo enobuhlobo.
"I-SKÅL INTL namhlanje inamalungu angaphezu kwe-14,000 kwiiklabhu ezingama-400 kumazwe angama-90 kwaye ndibona ixabiso kunye namandla anokubakho kumnatha wethu kumalungu ethu", utshilo.
Amava okutyela ngokuhlwa ayelungiselelwe ngokugqibeleleyo liqela labapheki likaPutahracsa elinconywe yiWine Pro kunye namalungu eSkål Int'l Hua Hin & Cha Am ababhiyozele ukuqala kwesiqalo esitsha nge-toast ethi "UKONWABELA UBUHLOBO OBULUNGILEYO BEMPILO NOBOMI OBUDE!
Umnyhadala olandelayo uzakubanjelwa kwi-Banyan Golf Club, e-Hua Hin ngolwesiBini, nge-20 kaNovemba ka-2018 enikezela umrhumo okhethekileyo wokuluhlaza: i-THB.2,200 ngosuku lwamalungu eSkål kunye neendwendwe zawo.
bhiyozela bhiyozelwa Chiang Chiang Mai club iiklabhu izimvo izifundo zokutya Umhla yokudlela ukwenza ezintle kwamkela indawo utshintshiselwano Ntlawulo isekwa fresh abahlobo G hla nganisa umlawuli jikelele njongo yegalufa iigalufa kulungile luhlaza injabulo impilo imbali Hua Hin Hyatt izimvo yamkelwe ziquka Intlangano Kugcina Krabi l yaqaliswa ubomi umlawuli Abaphathi EMarrakesh Marriott ilungu amalungu umsebenzi Mr imfuneko womnatha abasanda EyeNkanga Mnikelo Phuket Ezinokwenzeka isipho Ootitshala Khuthaza utshintsho yazisa kwakhona resort restaurant bu kumkani Samui isabelo ezizodwa intetho ukuqala Icandelo lezoKhenketho ukhenketho nokhenketho ekugqibeleni Unite isemgangathweno inani vice umsekelwa Mongameli umbono ilizwi efuna Iveki isiselo somdiliya Ehlabathini lonke